ज्यो’तिष शा’स्त्र अनुसार कुन बार जन्मे’को मानिस’ले कति धन क’माउँ छन? जन्नुहोस। – live 60media
ज्यो’तिष शा’स्त्र अनुसार कुन बार जन्मे’को मानिस’ले कति धन क’माउँ छन? जन्नुहोस।
ज्योतिषका अनुसार जुन बार जन्मियो त्यो बारको ग्रहको प्रभाव जीवनका सबै पाटामा पर्छ । मान्छेको स्वभाव र भाग्य समेत जन्मबारले निर्धारण गर्ने ज्योतिष शास्त्रीको दावी छ । कस्तो हुन्छ कुन बार जन्मिनको मान्छेको स्वभाव र भाग्य थाहा’पाउनुस् ।
स्त्रीआइतबार जन्मिने स्त्री दान-पुण्य गर्ने र बलशाली एवं चतुर हुन्छन् ।सोमबारःपुरुष-सोमबार जन्मिने ब्यक्तिको बोली मिठो हुन्छ ।
स्त्री-सोमबार जन्म भएका महिला सुन्दर हुन्छन् । यस्ता महिलामा मिठो बोली र शान्ति प्रिय र पुत्रवति हुन्छन् ।मंगलबारःपुरुष-मंगलबार जन्म हुने ब्यक्ति सामान्यतया धनी हुन्छन् । यस्ता ब्यक्तिको स्वभाव उग्र हुन्छ । यसै कारण उनीहरुसँग मानिसहरु वेखुसी हुन्छन् । यिनीहरुलाई छाला सम्बन्धी रोग हुन सक्छ । दुख र सुख आउने जाने भैरहन्छ ।स्त्री-कुनै पनि स्त्री शुक्रबार जन्मेकी छे भने उसको श्वभाव चंचल हुन्छ । यस्ता स्त्री मस्ती मजाक गर्छन् ।
परिवार र समाजमा विशेष इज्जत हुन्छ । केही काला रंगका भएपनि सुन्दर हुन्छन्।शनिबारःपुरुष-जुन ब्यक्तिको जन्म शनिबार हुन्छ उनीहरु कृषि ब्यावार वा प्रविधीको क्षेत्रमा रुची राख्छन्। यिनीहरुका लागि बाल्यकाल कष्टपूर्ण हुन सक्छ। भाइ बहिनी वा दाइ दिदीबठ्ठ सन्तुष्टी मिल्दैन। यिनीहरुलाई २० र २५ वा ४५ वर्षमा कष्ट हुन्छ।स्त्री-शनिबार जन्मिने स्त्री दुबली पातली हुन्छन् तर अग्ला। सामान्यतया यस्ता स्त्री कालो वर्णका हुन्छन। यस्ता महिला अरुका कुरा काट्ने पनि हुन् सक्छन्।